भूमिगत रेलयात्रा र बिचरा मूत्रथैली - विकिपुस्तक
भूमिगत रेलयात्रा र बिचरा मूत्रथैली
सो दिन सबेरै भोजनमा सामेल हुनुको मुख्य प्रयोजन के थियो भने म मेरी आत्मीया चेली गोमा संग्रौलाको निमन्त्रणामा २०६३ बडा दशैंको टीका लगाइदिन र आशीर्वाद दिन आर्लिङ्टन जाँदै थिएँ । गोमाहरू पाँच दिन अघि मात्र डी.सी. बाट त्यहाँ सरेका थिए । गोमाको डेरा आर्लिङ्टनको ११औं स्ट्रिटमा थियो । त्यहाँ पुग्ने प्रसस्त बाटा (रुट) थिए तापनि दुईवटा बाटालाई मैले विकल्पका रूपमा लिएको थिएँ । एउटा बाटो उडब्रिजबाट फ्रान्कोनिया हुँदै जान्थ्यो भने अर्को बाटो उड्ब्रिजबाट मेरिफिल्ड हुँदै त्यहाँ पुग्थ्यो ।
फ्रान्कोनियाबाट जाँदा बस र रेल दुबै नचढी पुग्न सकिंदैनथ्यो भने अर्कोबाटो भएर जाँदा अलिक सजिलो पथ्र्यो; किनभने मेरिफिल्ड हुलाकमा ज्वाइँको नोकरी थियो । त्यहाँसम्म उहाँसँगै जान सकिन्थ्यो र त्यहाँबाट मेट्रो रेल समात्दा हुन्थ्यो । मैले मेरिफिल्डसम्म ज्वाइँसँगै जाने निश्चय गरें । ९ बजे ज्वाइँ र म मेरिफिल्ड प्रस्थान गर्यौं । ज्वाइँले कार हाँक्नु भयो । म उहाँकै छेउमा पेटी बाँधेर बसें । गाडी आफ्नो गन्तव्यतिर हुइँकियो । बिचबिचमा अनगिन्ती राता र निला बत्तीहरूको अवरोध र निरवरोधको द्वन्द्वमा पीडित हुँदै गाडी अघि बढ्यो । गाडी प्रत्येक चौबाटामा त्यसरी रोकिएको देख्ता राता र निला बत्तीलाई क्रमशः नेपालको बाटो बन्द गर्ने आन्दोलनकारी र बाटो खुलाउँदै हिड्ने सुरक्षाकर्मीमा अनुवाद गरें मैले ।
चटक्क सिउँदो काडेर कपाल कोरेकी नेपाली युवतिझैं दुबैतिर जङ्गलैजङ्गल भएका अमेरिकी सडकको दृश्यले म ‘आफ्नै देशको आफ्नै जन्मस्थानतिर पो छु कि !’ एकछिन कल्पनामग्न भएँ । कसैले अमेरिका कस्तो छ ? भनी सोध्यो भने म भनौला, ‘अमेरिका सडकैसडकजस्तो छ ।’ यो मेरो मनोवाद थियो । वास्तवमा अमेरिकी विकासको मूर्तरुप नै अमेरिकी सडक हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
सयौं कर्मचारीले गर्न नसक्ने काम त्यस मेसिनले गर्छ । त्यस किसिमको मेसिन भर्खरभर्खरै तयार भएको रहेछ । त्यस हुलाकले अहिले परीक्षणका रूपमा कार्य गर्दै रहेछ । पछिपछि विश्वका अन्य मुलुकमा पनि त्यस किसिमको प्रविधि सुरु हुन सक्ने देखिन्छ । गाडीलाई हुलाक अगाडि पार्किङ् गराएर हामी त्यहीं नजिकैको ‘सेल ग्यास’ स्टेसनमा गयौं । त्यस ग्यास स्टेसनमा विराटनगरका भण्डारी काम गर्छन् । उनको नाम केदार भण्डारी हो । उमेरले पैंतीसे चालीसे जस्तो लाग्ने ती मान्छे अमेरिका पुगेर पनि स्वभावमा परिवर्तन नभएका नेपालीमा गनिन्छन् । वास्तवमै यस्ता नेपाली अमेरिकामा कमै हुनुपर्छ मेरा विचारमा । मेरा लागि उनी बिस्तारै बोल्ने मिजासिला नेपाली ठहरिए । अमेरिकामा बस्ने कुनै नेपाली त बोल्दा पनि पैसा लाग्छ जस्तो गर्दा रहेछन् । कुनै चाहिं फोन गर्छु भन्छन् तर पटक्कै गर्दैनन् । उनीहरूले फोन गर्नु त परै जाओस् आपूmले गर्दा पनि फोन उठाउँदैनन् । आफ्नै देशका नेपाली त यस्ता छन् भने भारतीय र पाकिस्तानी झन् कस्ता होलान् ! बरु एउटा ताइवानीले मलाई ‘आर यु इन्डियन ?’ भनेर सोद्धा मैले ‘नो आइ एम नट, आइ एम नेपाली’ भनेथें । त्यसपछि उसले मसँग हात मिलाउँदै भनेथ्यो, ‘थ्याङ्क्यु, यु बिलङ् टु द कन्ट्री अव माउन्ट एभरेस्ट ।’ आफू चाहिं भारतीय र पाकिस्तानी भेटेपछि आफ्नै दक्षिण एसियाका हुन् भनेर दाजुभाइजस्तो गर्यो तर अघि कताबाट छिनाइसक्या हुन्छ । प्रायः सबै ट्याक्सी ड्राइभर भारतीय र पाकिस्तानी मात्र भेटिन्छन् । कतै हिंड्दा उनीहरूको ट्याक्सीमा परिएछ र आफूलाई उनीहरूले दक्षिणएसियाली भनेर चिनेछन् भने ठग्नुसम्म ठग्छन् । अफगानी र इरानीहरू चाहिं अलिक असल हुँदा रहेछन् ।
अझ अघि बढें । दाहिनेतिर लाममा बनिएका गगनचुम्बी भवनहरू थिए । एकछिन उभिएँ र ती सुन्दरतम महलहरूको प्राकृतिक डिजिटल फोटो लिएँ मसँग भएको दुई लेन्सको ओरिजिनल क्यामराबाट । अझै ती फोटोहरू मभित्र सुरक्षित छन् । ती महलहरू अत्यन्त सुन्दर र सफा थिए । तलबाट माथिहेर्दा हातले टोपी समाउनु पथ्र्यो । त्यहाँ भएका भवनहरूमध्ये अधिकतम एक्काइस तले सम्म थिए । मैले त्यसैबेला झट्ट संझिएँ बोस्टन ट्रेड सेन्टरमा भएको पचास तले भवनका छेउमा त्यो भवन एउटा बचरो मात्र थियो । मेरो स्मृति न्युयोर्कको ‘ट्विनटावर’ मा गएर ठोकियो । एक सय दस तलाको त्यो जोडी भवन कस्तो थियो होला !
आ, एकसय दस तलाका छेउमा एक्काईस तलाको के बखान गर्नु ! भन्दै पाइला अघि बढाएँ । अलिक अगाडि गएर देब्रे मोडिएपछि ‘मेरिफिल्ड मेट्रो रेल स्टेसन’ पुगियो । एक जना अमेरिकी केटाको सहयोगमा पैसा छिराएर टिकट निकाल्न सिकें । ‘कोर्ट हाउससम्मको भाडा २.५० डलर लाग्दो रहेछ । हातमा टिकट लिएर म अलिक अघि बढें । त्यहाँ चार, पाँचवटा साँगुरा छिर्ने बाटा थिए, जसका बीचबीचमा काठका स्वचालित आग्ला थिए । अरु मानिसले गरेभैंm मैले पनि आफू छिर्ने ढाटको दाहिनेतिरको दुलामा टिकट छिराएँ । बीचको बाटो थुन्ने स्वचालित आग्लो फुत्त खुल्यो, म त्यहींबाट छिरें । छिर्दै गर्दा टिकट पनि त्यही छेउबाट फुत्त निस्कियो । टिकट समात्तै म अधि बढें ।
म स्टेसनमा झरेको दस मिनेट पछि भिएना फेयरफ्याक्सतिरबाट ओरेन्ज लाइनको रेल आयो । रेल रोकिएको केही सेकेन्डभित्र स्वचालित ढोका खुल्यो । भित्रका यात्रीहरू अवतरण गरिसकेपछि बाहिरका यात्रीहरू पनि लाममा एकपछि अर्को गर्दै पसे । म पनि लाममा थिएँ, आफ्नो पालोमा पसें र गन्तव्यस्थानतिर मुख फर्काएर एउटा सुन्दर कुर्सी मा बसें । आफ्नो देशमा भूमिगत हुने मौका नपाए पनि पाताल लोकमा गएर भूमिगत हुने मौका पाएँ, त्यसैले अमेरिकाको भूमिगत यात्रा मेरा निमित्त चिरस्मरणीय रह्यो । रेलको ढोका स्वतः खुल्ने र बन्द हुने भएकाले त्यसबाट ओर्लिने र चढ्ने कार्य शीघ्रातिशीघ्र हुनुपर्दो रहेछ । कुनै यात्रीले ओर्लिन र उक्लिन विलम्ब गरेमा ऊ पछि पर्दोरहेछ । तर त्यहाँ कुनै कार्यमा पनि विलम्ब गर्नुहुदैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा भएकाले कसैलाई पनि विलम्बको रोगले छुँदो रहेनछ । म विलम्ब गर्ने देशको विलम्बप्रुफ व्यक्ति थिएँ तापनि त्यहाँको द्रुत वातावरणले मलाई विलम्ब गर्न दिएन । तर विलम्बका कारण रेल छुटिगए पनि अर्को रेलबाट जान सकिन्छ । अब मलाई कसैले ‘अमेरिकाको रेल कस्तो हुन्छ ?’ भनी प्रश्न गरेमा म भन्छु, ‘अमेरिकाको रेल अमेरिकाको जस्तै हुन्छ ।’
मैले अमेरिकी रेलयात्राको कुरा उठाउँदा तपाईंले भारतको कटिहार, बरौनी, समस्तीपुर, लखनउ जस्ता रेलजङसनको पुनःस्मरणगर्नुभयो होला र चारधाम गर्न हिंडेका नेपाली तीर्थयात्रीहरूलाई त्यहाँका ठग कुल्लीहरूले सजिलै रेल चढाइदिने निहुँमा मनग्गे पैसा धुतेर मालसामान कोचेझैं झ्यालबाट जबर्जस्ती कोचेका घटनाहरू, दृश्यहरू तपाईंका आँखाअगाडि नाच्न थाले होला । त्यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर म फेरि पनि भन्छु, म अमेरिकी रेलयात्राको कुरा गर्दैछु ।
त्यहाँका रेलमा चढ्दा कसैले कसैलाई ठेलमठेल गर्ने कुरा त परैजाओस् एकले अर्कोलाई छोएको सम्म पनि देखिएन । पहिला उक्लनेहरू खाली सिटमा बस्ने र पछि उक्लनेहरू सिट नपाए उभिने; यस्तो परम्परा रहेछ त्यहाँ । रेल चढ्नेहरू सबै आ–आफ्नै धुनमा थिए । कसैलाई कसैको मतलव थिएन । एकदम शान्त वातावरण, हल्ला पटक्कै थिएन । कोही गफ गर्नेहरू पनि कसैलाई बाधा नपर्ने गरी बिस्तारै गर्दैथिए । रेलभित्र पस्दा कसैले कसैलाई नछोइकन पसे पनि सिटमा बस्ने बित्तिकै केही विपरीत लिङ्गीहरूले एकअर्काको अधरामृतपान गर्ने कार्यको उद्घाटन गरिसकेका थिए । मैले त्यस डिब्बाभित्र दृष्टि घुमाएँ । कोही पुस्तक पढ्दै थिए, कोही पत्रिका पढ्दै थिए । कोही चाहिं मस्तसँग मोबाइलमा गफ गरिरहेका थिए; नेपालमा जस्तो छेरुन्जेल कराएर होइन, बिस्तारै ।
मेरिफिल्ड स्टेसन पार गरेपछि दुई स्टेसन अर्थात् ‘इस्ट फल्सचर्च’सम्म रेल जमिनमाथि नै गुड्यो । लिखका दुवैतर्पm रहेका वृक्षहरूले, जनआन्दोलन अघिका राजाको सवारीमा नेताहरूले स्वागत गरेभैंm, झुकेर स्वागत गरिरहेको दृश्य अत्यन्त मनमोहक थियो । त्यो दृश्य देखेपछि मेरो एक मनले भन्यो, ‘हाम्रो काठमाडौंमा पनि भूमिगत रेलको व्यवस्था भए गाडी जाममा पर्ने कुराको राम्रो समाधान हुन्थ्यो होला ।’ अर्को मनले भन्यो, ‘देशको सबै संपत्ति भ्रष्टाचारीलाई नै पुग्दैन, केले रेलमार्ग बन्छ र !’ ‘इस्टफल्स चर्च’ देखि ‘कोर्टहाउस’ सम्म जम्मा चारवटा स्टेसन रहेछन् । ती स्टेसनहरू पार नगरुन्जेलसम्म नै रेल भूमिगत मार्गबाट गुड्यो । भूमिगत मार्गमा पसेपछि रेलको गति तीव्र भयो । सो मार्गबाट यात्रा गरिरहँदा कुनै किसिमको दृश्यावलोकन गर्न नपाइए पनि रेलभित्रको अमेरिकी संसार हेर्दै मख्ख पर्ने कार्यमा म अरु सबैभन्दा अगुवा भएँ ।
प्रत्येक भूमिगत रेल स्टेसन अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले निर्मित थियो । बत्तीको सुन्दर प्रकाशले भित्तामा लेखिएको स्टेसनको नाम प्रस्ट रूपमा परैबाट दृष्टिगोचर हुन्थ्यो । त्यसो त रेलभित्र पनि आउने स्टेसनका बारेमा बराबर उद्घोष गर्ने मात्र होइन विद्युतीय पर्दामा समेत देखाइदो रहेछ । यसबाहेक रेलको प्रत्येक डिब्बामा रेलमार्गको नक्सा टाँसिएको हुँदा आफू जानुपर्ने स्टेसन कुन हो र कति स्टेसनपछि त्यो आउँछ भन्ने कुरा नक्सा हेरेर जानकारी लिन सकिन्छ । अमेरिकी बसको तुलनामा अमेरिकी रेलमा यात्रा गर्नेको संख्या अधिक देखियो । रेलमा यात्रा गर्नेमा अधिकांश कर्मचारी र विद्यार्थी हुँदा रहेछन् ।
‘कोर्टहाउस’ आइपुगेछ, रेल रोकियो । दाहिनेतिरको ढोका खुल्यो । मैले सबैभन्दा अघि ओर्लिने अवसर पाएँ । त्यहाँ नजिकै रहेको छोटो सामान्य भर्याङ्बाट माथिल्लो तलामा गएँ । त्यस ठाउँमा ‘टिकट बुकिङ काउन्टर’’ र ‘टि.टि.आई’ को काम गर्ने ढाट थिए । ढाटमा टिकट छिराउने काममा ‘लाटा देशको गाँडो तन्देरी’ भइसकेको हुनाले त्यति समस्या परेन । टिकट छिराएँ, ढाट खुल्यो; पार भएँ । त्यहाँबाट सिधा अगाडि बढेपछि तल झर्ने र माथि उक्लिने दुइवटा विद्युत् भर्याङ् भेटिए । माथि उक्लिनेमा गोडा मात्र टेकाउनु पर्यो, उसैले बिस्तारै बगाएर माथि पुर्यायो । भर्याङ्को टुप्पामा पुगेर अलिकति हिंडेपछि एउटा बाणले ‘स्क्वायर प्लाजा’ को सङ्केत गर्यो । म त्यही वाणले संकेत गरेतिर लागें । पर अरु दुईवटा लामा भर्याङ् देखिए । उँभो बग्ने भर्याङमा चढेपछि त्यसले सूर्यको प्रकाश भए ठाउँमा पुर्यायो । बिजुलीको प्रकाशमा धेरैबेर यात्रा गरेर सूर्यको प्रकाशमा आएपछि सपनाबाट बिउँझेझैं भएँ । त्यस भर्याङ्ले ‘स्क्वायर प्लाजा’ पुर्यायो । दुवैतिर अग्ला अग्ला विशाल भवनहरू भएको त्यो प्लाजा रमणीय र आकर्षक पनि रहेछ ।
त्यहाँ पुग्नासाथ कोपिलाको खोजीमा मैले एक फन्को लगाएँ । कतै नदेखेपछि प्लाजाको पटाङ्गिनीमा रहेका फलामे कुर्सीमा उनको बाटो हेर्दै बसें । त्यहाँ मैले साढे तीन घण्टा कुर्नुपर्यो । दशैंको बेला भएपनि मौसम ओसिलो भएकाले निकै ठन्डा थियो । चार बजेसम्म पर्खंदा पनि कोपिला देखा परिनन् । त्यहाँको चिसो मौसमका कारण तीन घण्टाभन्दा अघिदेखि म लघुशङ्काद्वारा अत्यन्त पीडित थिएँ । हुँदाहुँदा म कहाँ हिंडेको, के गर्दैछु, कसलाई पर्खंदैछु जस्ता कुराहरू मेरा स्मृतिपटबाट अन्तध्र्यान भइसकेका थिए । मेरो स्मृति लघुशङ्काबाट कसरी छुट्कारा पाउने भन्ने कुरामा मात्र केन्द्रित भयो । मेरो एक मात्र कामना थियो मेरो मूत्र थैली बिन्लादेनको आत्मघाती चेलो नबनोस् ।
पुनः आफ्नो स्मृति प्लाजातिरै फिर्यो । यताउति आँखा घुमाएँ । न गल्ली, न च्याप, न काँचा इँटाले बनेका घर; नमोनास्ति केही थिएन त्यहाँ । भए पनि के गर्नु ! त्यो काठमाडौं थिएन, त्यो रत्नपार्क थिएन, त्यो न्युरोड थिएन । त्यो अमेरिका थियो । दुवैको सहमति भए त्यहाँ सयौं मान्छेका बीचमा गाला चुसाचुस गरे पनि कसैले केही भन्दैन । कसैले केही गर्दैन; तर बाहिर जथाभावि पिसाप गर्ने मानिसलाई हदैसम्मको सजाय हुन्छ, यो कुरा पक्का हो ।
म पिसाबले असह्य भएर घरी बस्दै घरी उठ्दै गर्दै थिएँ, ‘भिटामिन स्टोर’ उघ्रियो । भित्रबाट दुईजना मान्छे एकैसाथ बाहिर निस्किए । मलाई लाग्यो ती मान्छे दोकानकै हुनुपर्छ । तिनै मान्छेलाई बिन्तीभाउ गरेर यस फालबाट उम्कनु पर्यो भनेर उनीहरूको छेउमा गएँ । मैले एकदम मिजासिलो स्वरमा भने, “हाइ एक्स्क्युज मि; उड् यु माइन्ड प्रोभाइडिङ मि द रेस्ट रुम, प्लिज ।”
सुषुप्त अवस्थामा रहेको मेरो मानसिक तनाव रेस्टरुमको प्रयोगपछि पुनः यथास्थितिमा फर्कियो । तत्कालै घडीतिर आँखा पुगेछ, चार बजेर तीस मिनेट भएछ । त्यो स्थान मेरा निमित्त स्वप्नवत् थियो । त्यहाँ सबै नौला र सबै नयाँ अनुहार मात्र देखिन्थे । झापाका मान्छेले बैतडीको कुरा थाहा पाएझैं त्यहाँ पनि थाहा पाउँछन्, यो सोचाइ थियो; तर त्यहाँ दशौं स्ट्रिटमा स्थायी घर भएको मान्छेले एघारौं स्ट्रिट कता छ र कुन हो भन्ने थाहा पाउँदो रहेनछ । मानौं उसले एघारौं स्ट्रिट कुन हो भन्ने कुरा पढेकै छैन । उसले जे पढेको छ, त्यसमा ऊ पारङ्गत छ । हाम्रो देशमाफैं सबै विषयमा हात हालेर कुनै विषयमा पनि पूर्णता प्राप्त नगर्ने मान्छे त्यहाँ पाउन कठिन छ । मलाई एघारौं स्ट्रिट यतातिर छ भनेर कसैले बताउन सकेन; त्यसैले जुन बाटो आएको थिएँ त्यही बाटो त्यसरी नै उड्ब्रिज फर्कनुको विकल्प थिएन मेरा लागि ।
‘हलो, गोमा ! म तिम्रो गुरु कोमल बोलेको । तिमीले बहिनीलाई ‘स्क्वायर प्लाजा’ पठाउँछु भनेर मलाई ढुक्क पार्यौ म यहाँ आएर साढे तीन घण्टा बस्दा पनि कोपिला आइनन् । यसरी अपरिचित ठाउँमा मान्छेको हरिबिजोक पार्नुहुन्छ नानी ? म उतै फर्किन तल रेल स्टेसनमा आएको छु । अब हिंड्छु पनि ।’
गोमाका यी कुरा सुनेपछि मभित्र आशाको सानो टुसो पलायो । म फेरि अघिकै बाटो माथि गएँ । नभन्दै केहीछिन पछि कोपिला त्यहाँ आइपुगिन् । मैले निकै गम्भीर भएर आफ्ना गुनासा पोखें । उनले आपूm आएको तर भेट्न नसकी फर्केको कुरा बताइन् । उनले भनेको कुरा विश्वास नलागी नलागी पत्याइदिएँ ।
"https://ne.wikibooks.org/w/index.php?title=भूमिगत_रेलयात्रा_र_बिचरा_मूत्रथैली&oldid=5293" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन २४ जुन २०१४, १६:३७
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १६:३७, २४ जुन २०१४ मा परिवर्तन गरिएको थियो।